सरी है, घर परिवारको इच्छाविपरीत तिमीलाई स्वीकार्न सक्दिनँ !
म फोनमा कुरा गरेर हिँड्दै थिएँ।अगाडि उनी आएको थाहा नै भएन। फिल्मको कहानीजस्तै हामी ठोक्किन पुग्यौं।
उनको हातबाट मोबाइल खसेछ क्यारे, मैले सरी भनें। उनले झोक्किएर भनिन्- केको सरी, आँखा छैन ?
अफिसको फोन थियो काटें। उनको मोबाइलको फोनको स्क्रीन गएछ ’सरी गल्ती भयो म बनाइदिन्छुु’ भनें।
अगाडि मोबाइल पसल थियो। साउजीलाई सोधें-कति लाग्छ ? साउजीले भन्नुभयो- यो त पूरै चेन्ज गर्नुपर्छ। ३५०० लाग्छ।
मैले हुन्छ गर्दिनुस् भनें। गल्ती भएकै थियो बनाइदिनै पर्‍यो। मसँग जम्माजम्मी खल्तीमा तीन हजारमात्र थियो। साउजीलाई बाँकी पछि दिन्छुभन्दा मान्नुभएन पाँच सय ती मोबाइलवाली केटीले नै दिइन्। म पछि दिइहाल्छु तपाईंको नम्बर दिनुस् भनें। उनले नम्बर दिइन्।अफिसको काम सकेर मोबाइलवालीलाई फोन गरें। ’मिस चिन्नुभयो। म त्यही तपाईंको मोबाइलको डिस्प्ले फुटाउने मान्छे ५०० तिर्न कता आऊँ ?’ उनले जवाफ दिइन्,’ म घर पुगिसकें अब भोलि दिनुहोला।’ मनमनै सोचें भयो छोड्नुस् नि भनिनन् ५०० त बच्थ्यो ! अर्को दिन बिहानै साढे नौ बजेतिर मोबाइलमा घण्टी बज्यो। उनकै फोन रहेछ।
फोन उठाएँ। ’हजुर गुड मर्निङ’।
मैले तुरुन्तै भनिहालें, ’पैसा दिन काँ आउनु पर्ने ?’
उनले उत्तर दिइन्- सरी है !
’मिस के भयो ?’
ुहजुर सर कहाँनिर हुनुहुन्छरुु यति भन्न नपाउँदै त्यहीँनिर रोक्नुस् सर मैले तपाईंलाई देखिसकें। म आउँदैछु भनिन्। म नि चौराहानिरै बाइक रोकेर उभिएको थिएँ।
५०० मिटर टाढादेखि नै उनी आएको देखें। हातमा हिजो नयाँ डिस्प्ले हालेको मोबाइल, आइरन गरेको सिल्की कपाल, सेतो पाइन्ट, कालो हाफ टि(सर्ट, आँखामा कालो चस्मा, जति नजिक आउँदै थिइन्, त्यति नियाल्दै गएँ। अनि नाकमा नथिया, हातमा कालो चुरा पनि रैछ। नाम पनि थाहा थिएन मोबाइलमा डिस्प्ले वाली लेखेर सेभ गरेको थिएँ।
ुहाईु भन्दै खल्तीबाट पाँच सय झिकें।
पर्दैन मबाट गल्ती भएको हो, म फोनमा थिएँ। देखिनँ सरी भनें।
उनले निन्याउरो अनुहार लगाउँदै भनिन्, मेरो मोबाइलको डिस्प्ले पहिलै फुटेको थियो, हिजो खसेर फुटेको हैन, चेन्ज गर्नै पर्नेथ्यो तर त्यस्तै माहोल परेर हिजो चेन्ज गर्न पर्‍यो।
अफिस पुगेर आफ्नो काम गर्दै थिएँ फेरि म्यासेज आयो-सरी सर। मैले रिप्लाई गरिनँ। दिनभरिमा लगभग ५ पटक म्यासेज आयो। मैले रिप्लाई गरिनँ। साँझ लगभग ६ बजेतिर फोन आयो।
यतिकैमा कुरा सुरू भयो। उनले सोधिन्- घर पुग्नुभयोरु मैले हाँस्दै भनें- आज बाटोमा ठोक्किन कोही आएनन् समयमै घर पुगियो। उनले फेरि भनिन्- मैले सरी भनें त१ मैले तपाईंलाई यो सबै सत्य कुरा नभनेको भए पनि त हुने थियो तर भने नि हैन र!
मैले सानो स्वरमा हेल्लो भनें। मतिर हेरेर झस्किँदै भनिन्- काँ आउनु भाको ?
मैले तुरुन्तै उत्तर दिएँ-मोबाइलको डिस्प्ले फुटाउन!
आफ्नो चेक दिएँ। एकछिन रोकिएको समयमा जिस्किहालें। यसको लागि सातौ बैंक गइयो तपाईं कुन बैंकमा भनेर १० बजेदेखि खोज्दैछु। पैसा हातमा दिइन्। मन्द मुस्कान दिइन्। छुट्टिने बेला बाई भनें। उनले पनि बाई भनिन्। अनि आँखाले इसारा गरिन्।
’कता हुनुहुन्छ?’ उताबाट प्रश्न गरिन्।
जिस्केर बोलें, ’खाजा खाँदैछु एकछिनमा आइहाल्छु है घर!’
मदन भट्ट दाइको चिकेन स्टेसनमा छु। अफिस सकेको भए आउनुस्।
उनले केही नसोचेर हुन्छ म पुगें एकछिनमाु भनिन्।
तपाईंको प्रमोसन हुने भयो अब तपाईंले नेपालगन्ज जानुपर्ने भयो। खुसीले गदगद भएँ। तुरुन्तै स्नेहालाई सुनाएँ, घरमा मम्मी ड्याडीलाइ सुनाएँ। ३ दिनपछि मैले धनगढी छोड्नु पर्ने थियो। धनगढीमात्र हैन अब स्नेहासँग पनि सधैंजस्तो भेट नहुने पक्का थियो। यो सोच्दा चाहिँ मन खिन्न हुन्थ्यो। तर के गर्नु जानैपर्ने भए पछि म पनि नेपालगन्जतिर लागें। म जाने बेला एकछिन भेट्न आइन्। आँखाबाट आँसु झारिन्। मन त मेरो नि भारी हुँदैथियो तर ह्या आइहाल्ने त हो आठ दस दिनमा भनेर सम्झाए। उनी आफ्नो अफिस लागिन्, म नेपालगन्ज।
उनको अफिसको काम बढ्यो होला पक्कै पनि। यता मेरो नि धेरै जिम्मेवारी थपिएको थियो। हाम्रो ३र४ दिन बिराएर कुरा हुन थाल्यो। कुरा भए पनि पहिलेजस्तो कुरामा मिठास हुन्थेन।
ुके भाको छु भनेर सोध्दा केही हैन भनेर टाल्ने गर्थिन्। सानो-सानो कुरामा निउँ खोजेर रिसाउन थालिन्। रिसाएर हप्तौं नबोल्ने हुन थाल्यो। मोबाइल घण्टौंसम्म बिजी आउन थाल्यो, म्यासेजको रिप्लाई आउन छोड्यो। कता बिजी भनेर सोध्दा गर्दा ब्वाइफ्रेण्डसँग भन्थिन्। फेरि मजाक गरेको मामा घरको बैनी दिदी के के हुन् केके बहाना बनाउन सुरू गर्थिन्।
ुसरी है चक्कु हाम्रो जात मिल्दैन। बुवा मम्मीले मान्नुहुन्न। आजसम्म बुवा मम्मीले हुर्काएर यहाँसम्म पुर्‍याउनु भयो अब अन्तिममा आएर बुवामम्मीलाई धोका दिन सक्दिनँ। अस्ति एक जना केटा हेर्न आउनु भाको थियो। बुवा मम्मीलाई मनपर्‍यो अरे मैले नाइँ भन्न मिल्दैन। उहाँहरूको इच्छाविपरीत म जान सक्दिनँ। सरी है! आजसम्मको लागि। मैले माया के हो तपाईंबाट सिकें, तपाईंबाट नै पाएँ। मलाई लाग्छ म यति माया न कोहीबाट पाउन सक्छु न कसैलाई गर्न सक्छु तर पनि यो जुनीमा म तपाईंकी हुन सक्दिनँ।ु
फोन गरेको फोन बिजी थियो। त्यसपछि लाग्यो आफ्नोबाहेक अरु कसैको विश्वास नगर्नु किनकि अन्धकारमा छायाले त साथ छोड्छ१
उसलाई जानु थियो मैले जान दिएँ। योभन्दा बढी माया म के गर्न सक्थें र! सबै ठाउँबाट ब्लक भैसकेको म के नै गर्न सक्थे र रु मेरो आँसु देखाउने ठाउँसम्म रहेन।
तिमी मेरो होइनौ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कहिलै बिर्सिन नसक्ने एक खास मान्छे हौ ’तिमी’
अचेल अब दुस्ख निकै प्यारा लाग्छन् मलाई हर घडी साथ जो निभाइरहेका छन्। अब जिन्दगीमा धोका दिनको लागि कोही ठोक्किन आउने छैनन्। कोही नआऊन् पनि।
कतै तिमीले यो पढ्ने मौका पायौ भने पढ्नु मेरो माया बुझ्नु तर तिम्रो लागि त्यो ठाउँ अब छैन हटाइसकें फर्केर आउने कोसिस नि नगर्नू!हिँडिसकेको मान्छे फर्कियो भने उसको साइत बिग्रन्छ भन्छन्, तिमी हिँडिसक्यौ अब नफर्किनु ल तिम्रो साइत बिग्रन सक्छ!